China Pickle Pot Fekita uye Vagadziri | Chuancheng
Yakakwana yako yekubika & yekubheka zviyo senge pasta, penne, bhinzi dzakaomeswa, mupunga, bhari, makomarara, svutugadzike, kofi, tii, nzungu kana kuchengetedza yako yaunoda herbs, michero & miriwo uye jams. Yedu yegirazi kicheni canister set yakanakira kuitisa zvakare.
Chikafu chakachengetedzwa chichagara chitsva kwenguva refu neyakavhara mweya yedu uye silicone gasket chivharo. Girazi rakajeka rinokutendera kuti uone zviri mukati uye kuti chikafu chakachengetedzwa chiri kufambira sei.
Iyo mbiya yose yakagadzirwa neyekudya-giredhi zvigadzirwa, yakasimba uye inodzoreredza, yakachena uye isina-chepfu, haigoni kuburitsa makemikari anokuvadza muzvikafu kana kutora zvinwiwa mushure mekushandisa kwakawanda.
Yakakura yeCanning - Yakakwana yekuchengetedza uye kubanikidza vanofarira; chirongo ichi chinogona kuvezwa uye chakagadzirirwa kumanikidza enzesa dzepamba, maperesi, mhiripiri, jamu, jellies, kuchengetedza, matomatisi sosi, salsa, broths uye nezvimwe zvakasiyana.
Yakakura Yekuchengetedza - Inotapira uye inosimbisa uye chengetedza chikafu chakaoma uye svutugadzike dzakadai shuwa, mupunga, oats, furawa, pasitaki, makuki, makuki, uye pipi. Iyo yesimbi airtight chivharo inoenderana ne-bpa-isina-plastisol yechisimbiso chakasimba chinochengeta chikafu chinyowani uye chichiwedzera shefu-hupenyu hwayo. Iyo chirongo zvakare igadziriro yakakura yekuronga yezvinhu zvipi nezvipi zvakasununguka zvaunoda kuchengeta munzira yehuswa.
Kugara Mouth - A 2 ¾ inches inches muromo inoita kuti zvive nyore kuisa plump michero uye miriwo senge mabeche uye matomatisi mune muchirongo. Kuvhurika kwakakura kunoita kuti kuwanikwe kuri nyore kuzasi kwejari kuitira nyore uye kuchenesa zvakakwana neruoko nesiponji.
Mhando yeGirazi - yakagadzirwa neyemhando yepamusoro shuwa lime girazi rinoramba kupwanya uye kutyora. Girazi redu rinogezeswa rakachengetedzeka uye microwave yakachengeteka pasina chivharo. girazi iri ndiro 100% chikafu chakachengeteka uye chinotungamira-chisina hutano chekuchengetedza chikafu uye chinwiwa chinwiwa.
Iro Girazi rakajeka - Imwe yega yegirazi mason jar yakagadzirwa nekristaro yakajeka, isina girazi-isina girazi kuve nechokwadi chekuonekwa kwepamusoro kunobvumidza iwe kuti uone zviri nyore jelly zvirongo zvemukati uye ona kana ivo vakapambadzwa. Iyi mbiya dzakapfava zvakare ndiyo turuvhe yakakwana yekushongedza nezvakashongedzwa zvemhizha nehunyanzvi, muchato nemabiko zvinofadza, uye zvimwe zvirongwa zveDIY.
Yepfuura: Bhodhoro Reuchi
Inotevera: Pipi Matangi
Magirazi emabhotoro eAhoples
Girazi Pickle Bhodhoro
Girazi Pickle Jars
Pickle Container Girazi
Kuchengetera Kuchengetera Mbiya
130ml girazi munyu uye pepper shaker zvinonhuwira bhodhoro
Manual Abrader Kicheni Jinda Gadhi Girazi Muviri S ...
Pepper Grinder kana Munyu Shaker
Crystal Pipi Jar neLid, Zvakajeka Girazi Chikafu St ...